कोरोना महामारीका नेपालमा अर्बौँ लगानीका होटल खुले-CRI
कोरोना महामारीका नेपालमा अर्बौँ लगानीका होटल खुले
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको प्रतिकूल समयमा पनि नेपालमा नयाँ होटल सञ्चालनमा आएका छन्। महामारीकै समयमा संचालनमा आएका ती होटलहरुमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ। अर्बौंको होटलहरु धमाधम खुलिरहेका छन्। कोरोनाकै बीच एउटा अर्बभन्दा बढी लगानी भएको होटल खुलिसकेको छ भने एउटा बनिरहेको रातोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
कोरोना माहामारीकै बीच अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड होटल रमादाले २ अर्ब लगानीमा होटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । भिजिट नेपाल २०२० लाई लक्षित गरेर बनाइएको होटल कोरोनाका कारण सञ्चालनमा ढिला भएको अध्यक्ष गोपाल पङ्गेनीले बताउनुभयो। विस्तारै कोरोना प्रभाव कम हुँदै जाने र सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय उठ्न थाल्ने आशामा आफूहरुले होटल सञ्चालनमा ल्याएको पङ्गेनीले बताउनुभयो।
होटलले आफ्ना पाहुनाहरुलाई लक्षित गरेर विभिन्न सुविधायुक्त कोठा, टेरेस लगायतका विभिन्न रेस्टुरेन्ट, बैङ्क्वेट र सेमिनार हल, स्विमिङ पुल, जिम हल जस्ता सुविधा छन्। होटल स्थापन गर्न नबिल बैङ्कले फाइनान्स गरेको छ। सेयरधनी तथा बैङ्क लगानीसमेत गरी हालसम्म २ अर्ब लगानी भइसकेको र निर्धारित योजनाअनुसार यसलाई बिस्तार गर्दा करिब ३ अर्ब ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। होटलको पछाडि पट्टि जग्गा किनेर विस्तार गर्ने सोचमा होटल छ।
यता कोरोनाकै बीच लस्ट होराइजन पोखरामा बनिरहेको छ। सन् २०२० को अन्त्यदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइए पनि होटल सञ्चालनमा ढिला हुने भएको छ। १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको यो होटल पाँच तारे स्तरको हो। ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो होटलमा २ वटा प्रेसिडेन्सियल स्विट रुमसहित ३८ वटा रुम, २ वटा प्राइभेट स्विमिङ पुलसहित ४ वटा स्विमिङ पुल छन्। पछिल्लो होटलहरु व्यवसाय फस्टाउने आशामा उठ्न थालेका छन्।
कोरोनाकै बीच सानाठूला होटल गरी उद्योग विभागका १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानीका होटल उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका उद्योग धेरैजसो काठमाडौँ केन्द्रित छन्। होटल क्यान्टन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २ मा ५ करोड लगानीमा बन्ने छ। यसले जेठ २७ गते उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएको हो।
यता काठमाडौँमै होटल क्यामोलोङमा प्रालि ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा बन्ने छ। यो काठमाडाँै महानगरपालिका वडा नं. ६ मा खुल्ने कोरोनाकै बीच उद्योग विभागमा दर्ता भएको हो। २५ करोड लगानीमा होटल लुसोङ्सी प्रालि २५ करोड लगानीमा काठमाडौँ वडा नं. १६ मा खोल्नका लागि उद्योग विभागमा भदौ २ गते दर्ता भएको छ।
१० करोडको लगानीमा फुटा होटल काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ मा बन्दैछ। यसले पनि विभागबाट अनुमति पाएको छ। कास्की जिल्लामा मोलिह्वाकाई रेस्टुरेन्ट ५ करोड लगानीमा बन्न अनुमति पाएको हो। युयाङलोउ रेस्टुरेन्ट प्रालि १५ करोडमा लगानीमा बन्नका लागि दर्ता भएको छ। यो पनि काठमाडौँकै लागि दर्ता भएको हो।
वाङ चेन होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट प्रालि २५ करोड लगानीमा काठमाडौँ महानगरपालिका–२४ मा बन्दैछ। यो असोज १९ गते विभागमा दर्ता भएको हो। युहाइबो होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट २५ करोड लगानीमा बन्दैछ। कअन चेङ्ग होटल विथ रेस्टुरेन्ट १५ करोड लगानीमा बन्नेछ
कोरोना महामारीले सबैभन्दा प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै उठ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले २३.७६ प्रतिशत होटल अझै खुल्न नसकेको देखाएको छ। हाल ४६.५३ प्रतिशत आंशिक सञ्चालनमा छन् भने २९.७० प्रतिशत होटल पूर्ण सञ्चालनमा छन्। विस्तारै खुल्न थालेका होटलले १८.११ प्रतिशत उत्पादन गर्न थालेका छन्। होटलको तलब, ज्याला खर्च पनि विस्तारै कोभिडका अगाडिको तुलनामा वृद्धि हुन थालेको राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। होटलको औसत ज्याला तथा तलब खर्च ५६.३५ प्रतिशत पुगेको छ।